HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari23 Elazig
Wadada tareenka ee Elazig, wadada iyo wararka gawaarida fiilada
Heerarka masaafada bulshada ayaa laga soo bandhigay kuraasta baabuurta gaadiidka dadweynaha degmada Elazig. Marka la eego cabirrada fayraska degmada Colana ee degmada Elazig, boqolkiiba 50 saamiga degenaanshaha ee gaadiidka gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka oo ay Wasaaradda Arimaha Gudaha u dirtay maamulayaasha. [More ...]
Falalka ka-hortagga jeermiska iyo jeermis-ka-qaadista waxaa fuliya dowladda hoose ee Elazig markasta oo lagu isticmaalo gaadiidka dadweynaha. Adduunka oo dhan ka yar saameynta ay fayraska goobaha cusub Choir (Covidien 19) waxaa loo arki karaa ka dib ka dillaacay of Elazig dalka Turkiga [More ...]
Kurtalan Express Oo Dhimatay Dhulgariir Ka Dhacay Elazig; Qaybta loo yaqaan 'Kurtalan express', oo leh 80 rakaab ah sababtuna tahay dhul gariir ka dhacay agagaarka Özyürt hamlet ee tuulada Tekevler ee degmada Maden ee Elazig, ayaa la baabi'iyey, masiibada si raqiis ah ayaa looga gudbey. [More ...]
Dowlada hoose ee degmada Elaz has ayaa ku dhawaaqday in shaqaalaha caafimaadka ee kashaqeynaya howlgalada ka dhanka ah viruska corona ay ka faa iideysan karaan gaadiidleyda dadweynaha si bilaash ah ilaa iyo 10ka Abriil, 2020. Iyada oo leh fayraska corona [More ...]
Dowlada hoose ee degmada Elazig waxay ku sameysay daraasado jeermis dilid iyo jeermis-ku-tallaalis ee baabuurta gaadiidka dadweynaha lagana soo horjeedo halista cudurrada faafa. Si loogu suurta geliyo muwaadiniinta inay ku safraan jawi nadiif ah oo nadaafadeed, Degmada Elazig waxay marmar isticmaashaa gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Tareenka 10-baabuur ah, oo lagu dhammeystirey TÜVASAŞ, oo ah shirkad hoos timaadda TCDD, kana tagtey Sakarya si ay hoy ugu siiso dadka ka badbaaday dhulgariir, ayaa gaaray Saldhigga Tareenka Elazig. Wagons waxay ka dhacaan Elazig raaxada buuxda ee guri buuxda. [More ...]
Elazığ iyo Malatya abuuraa burburka weyn dalka iyo si ay u taageeraan dhan of Turkey si qoto dheer uga caroodeen baahiyaha hoyga dhulgariir muwaadiniinta by musiibada saamaysay, Elazig iyo saldhigga kululaynta dhismaha halkan gaadhifardood sugaya [More ...]
100 ka mid ah Gawaarida Guryaha Shaqaalaha ayaa waxaa soo saaray TÜVASAŞ suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah oo leh naqshad u gaar ah oo loo adeegsaday in lagu daboolo baahiyaha hoyga shaqaalaha wadooyinka ee iyaguna xanaaneeya dayactirka TCDD. [More ...]
In kasta oo dadkii habeenkii ku seexday dariiqa dhulgariirkii ka dhacay Elazig ay gubteen si ay u kululaadaan, dhibaatada ugu weyn ee dadka ku haysa teendhooyinka ayaa loo dejiyey qeybo kala duwan oo magaalada ah xilliga qaboobaha ee laga jaray bartamihii 10-ka. Markii dhulgariir dhacay, “Teendhooyin [More ...]
Markii argagixisada PKK ay qarxiyeen waxyaabaha qarxa oo gacanta lagu dhigayo halka Elazig-Tatvan duulaanka lagu qaaday, maraakiibta xamuulka qaada ayaa kor loo qaaday 4 sano kadib. Waxaa lagu qabtay July 30, 2016 magaalada Masala, tuulada Burgudere ee Elazig. [More ...]
Dhismaha 2014 wuxuu bilaabay 368 milyan oo rodol, xawaaraha ugu dambeeya ee shaqada ka socota Buundada Kömürhan ayaa sii socota. Buundada, oo galaysa suugaanta adduunka markii la dhammeeyo, ayaa loo qorsheeyay in la dhammeeyo oo loo furo taraafikada 2020. Wadada weyn ee Malatya-Elazığ [More ...]
Matoorku waa hoyga ganacsiga. Gaari ma dhaqaaqi karo la'aantiisa. Muzaffer Sezgin wuxuu ka mid yahay dadka fahamsan muhiimada mashiinku doonayo inuu dalkiisa u adeego. Warshadda 'SEZGİN MOTOR' ee ku taal Elaz Un, Hawada Unmanned [More ...]
Şahin Şerifoğulları, Duqa magaalada Elazığ, wuxuu sii wadaa hirgelinta mashaariicda loogu talagalay in lagu yareeyo dhibaatooyinka gaadiidka ee magaalada, kuwaas oo ka mid ah ballanqaadyadii doorashada ka hor. Macnaha guud, ku dhawaad ​​70 kun oo gawaarida [More ...]
EBUAS 120 wuxuu bilaabay inuu siiyo darawalka tababbarka heerarka EU. Taxanaha koowaad, isgaarsiinta, xirfadaha, xakameynta xanaaqa iyo qanacsanaanta ayaa looga wada hadlay tababarka saacadaha 6. Akadeemiyada Atakan Yıldız, aasaasaha iyo tababbaraha horumarka adduunka ee shakhsiyadeed [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Elazig
Gawaarida dadweynaha ee degmada Elazig ayaa bixin doona adeeg bilaash ah inta lagu gudajiro afarta maalmood ee fasaxa ah. Bayaan ay soo saartay dowladda hoose ee degmada Elazig, ayay Elazig dowladda hoose si ay gacan uga geysato soo dhoweynta xasilloon oo nabad ah ee muwaadiniinta wadajirka ah [More ...]